Shaybaarka Badbaadada Korantada ee Anbotek waa mid ka mid ah shaybaarada ugu horreeya ee shirkadda si ay u bixiso baaritaanka amniga iyo caddaynta mashaariicda kala duwan ee alaabada ganacsiga iyo kuwa elektiroonigga ah iyo kuwa elektaroonigga ah. Hay'ada tijaabinta Anbotek waxay leedahay qalab casri ah iyo qalab wax lagu baaro. Waxay leedahay khibrad hodan ah injineernimada badbaadada iyo in kabadan 20 injineerro farsamo xirfadlayaal ah, oo si buuxda u buuxin kara baahiyaha baaritaanka macaamiisha iyo shahaadaynta.
Awoodda Sheybaarka Hordhac
• Ka caawi macaamiisha baabi'inta khataraha nabadgelyo ee ka imaan kara inta lagu jiro naqshadeynta alaabada, sida nadiifinta, masaafada gurguurta, iyo qiimeynta qaabeynta qaab dhismeedka si looga fogaado luminta wax ka beddelka caaryada.
• Sameynta baaritaanka korantada, qiimeynta qaabdhismeedka, iyo soo gudbinta warbixin xisaabeed ee wajiga shahaadada alaabta hore.
• La xiriir hay'adda caddeynta oo aad u metelayso magaca macmiilka si aad u sameyso dukumiintiyada arjiga, taas oo badbaadin karta waqtiga codsiga isla markaana yareyn karta dhibaatooyinka macaamiisha ee nidaamka dalabka.
• Ka caawi macmiisha maaraynta xisaabaadka warshadda iyo ka caawinta xallinta su'aalaha laga helo xisaabaadka warshad. Ka caawi soo saarayaasha inay qabtaan la tashiga istaandarka tababarka shaqaalaha ee AMMAANKA, kireysiga xarunta sheybaarka.
Sirdoonka PD-ga oo si dhakhso leh u adeegsada, qalabka wax ka badala caqliga, guriga caqliga badan, qalabka guryaha ee caqliga badan, wax soo saarka nalalka caqliga badan, alaabta jiilka cusub ee tikniyoolajiyadda macluumaadka, alaabada maqalka iyo muuqaalka ah ee caqliga badan, qalabka wax soo saarka dhamaadka-dhamaadka ah, godadka casriga ah, qalabka caafimaadka, cabirida qalabka amniga iyo kormeerka iyo qalabka xakamayso Sug.